Sqribble: Pịa, Chepụta, ma bipụta akwụkwọ nke gị, Nnyocha ọmụmụ, ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ na nkeji! Martech Zone
Satọde, Febụwarị 6, 2021 Satọde, Febụwarị 6, 2021 Douglas Karr
Ka ị na-anwa ịnye nkọwa doro anya, ozi, na iche iche maka ngwaahịa na ọrụ gị maka ndị ahịa na atụmanya gị, obi abụọ adịghị ya na mbipụta dijitalụ bu uzo di egwu nke ikesa ihe omuma di omimi.
Mgbe i nwere ike ide ihe ebook na iji ederede okwu ederede dika Google Docs, ohere gị ịhazi ọdịnaya, gụpụta ọmarịcha eserese, wee mepụta ọmarịcha akwụkwọ na-achọkarị onye na-ese ihe osise na-eji ngwa ọrụ dịka InDesign. I nwekwara ike nwalee ya n'onwe gị mana ikikere dị oke ọnụ ma usoro mmụta dị nkenke.
Sqribble bụ ikpo okwu a ma ama maka ịmepụta na ikesa akwụkwọ dijitalụ gị - ha nwekwara ọtụtụ ndebiri gafee ọtụtụ ngalaba niche iji malite ịmalite. A bụ ihe nnyocha video:
Atụmatụ Sqribble Gụnyere
Mfe Jiri - Dị Mfe iji software na mfe ịdọrọ na dobe technology. Ọ dịghị echichi dị mkpa, ọ niile na-eme site na ha online n'elu ikpo okwu.
Designzọ aghụghọ - Ndebiri 50 ịhọrọ site na 15 ụdị niche na-ewu ewu. Ha gụnyere tebụl nke ọdịnaya, nkụnye eji isi mee & akara ụkwụ, nọmba peeji, ị nwere ike ịhazi nke ọma ma gbakwunye ọtụtụ peeji ịchọrọ.
60 Nke Abụọ - Mepụta akwụkwọ ọgụgụ dị ịtụnanya, ọmụmụ ihe, na akwụkwọ akụkọ na nkeji.
Ọdịnaya ozugbo - Ikwu dee ihe ọ bụla na anyị na akpaghị aka ọdịnaya engine. Naanị tinye URL gị na Sqribble ga-ebubata ọdịnaya ahụ ọsọ ọsọ na mfe.
Ahịa ahia - Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ire akwụkwọ ntanetị gị, ị nwere ike ree akwụkwọ ndị ahụ dị ka nke gị ma debe 100% nke uru.
Websitelọ Ọrụ Weebụ - Ọ bụrụ n'ịchọrọ ime nke a maka ndị ahịa gị, ikpo okwu na-abịa na pọtụfoliyo iji mee ka ndị ahịa gị nwee mmasị. Tinye ma wepu ndị ahịa ozugbo n'elu ikpo okwu.
Chekwaa oge, chekwaa ego, nweta kickstart na ọdịnaya gị, ma mepee ya niile n'ime atụmatụ mara mma… enweghị ike ịjụ karịa nke ahụ!
Pịa site na ya ma ị ga-ahụ ọtụtụ puku akaebe banyere etu ikpo okwu si arụ ọrụ. Ha nwere ihe karịrị ndị ọrụ 30,000.
Ma ọ bụrụ na ị debanyere aha ugbu a, ị ga-enweta 70% kwụsịrị ọnụahịa oge niile:
Mepụta eBook na nkeji 5
Na-enweghị Pịnye Okwu!
Ngosi: Abụ m mmekọ Nkwonkwo
Tags: ikpe ọmụmụ kereikpe ihe ndebiridijitalụ ekwusara n'elu ikpo okwuebook kereebook imeweebook ndebirioghereokike okikendebiri ndebiri